Maalgalinta – Advokatbyrån Divinius
FinanseringDifaacida kharash maxkamad ama kaalmeynta kharash maxkamad?
Haddii adiga ka qeybaadatid dacwo khilaaf oo maxkamadeed waxaa suurtagal ahaan karto in adiga lagaa kaalmeyn karo kharashka wakiilka oo difaacid kharash maxkamad ama kaalmeynta kharash maxkamad. Difaacida kharash maxkamad adiga waxaa ka heli oo kamid tahay caymiska guriga. Kaalmeynta kharashka maxkamada waxaa laga helaa dowlada oo waxaa la heli kara qofka haddii uusan haysan difaacida kharash maxkamad. Hoostan baa anaga ku soo koobi warbixin gaaban – fadlan adiga ku soo dhawoow oo wakhtiga aad dooneysid nala soo xiriir haddii aad dooneysid inaa su’aalo na weeydiisid. Markaa adiga anaga na howl galisid anaga waa kaa caawin codsashada lacagta difaacida kharash maxkamad iyo/ama kaalmeynta kharash maxkamad.
Nidaamka baa ah in adiga gacanta koowaad haddii aad kamid noqotid dadka ey quseyso khilaaf oo dacwo maxkamadeed waa inaa adeegsatid caymiska gurigaada qeybta kamid ah quseyso difaacida kharash maxkamad sidii aad u heshid caawinaad maalgalin. Shuruudaha oo bixinta difaacida kharash maxkamad weey ku kala duwanyahiin shirkadaha caymiska. Anaga baa ku caawin sidaa uga wardoontid sida ey wax ka yeelaan shirkada aad caymiska uga jirtid.
Haddii ey noqoto inaa sabab un darteed aadan helikarin difaacida kharash maxkamad adiga waxaa dhicikarto inaa xaq u leedahay kaalmeynta kharash maxkamadeed. Shuruudaha haddii qofka la siin kaalmeynta kharash maxkamadeed waxaa kamid ah qofka dhaqligiisa ”waa inuu ka yar yahay” 260 000 sanadkiiba. Markaas kadibna adiga waa inaa baahi u qabtaa kaalmeynt ku saabsan arrimaha sharciga iyo waa iney aqligal tahay iney dowlada kula bixiso kharashka dacwada khilaafka. Qiimeyntaas waxaa suubin Wakaalada kaalmeynta kharash maxkamad[Rättshjälpsmyndigheten] ama maxkamada ku shaqo leh dacwada khilaafka.
Intaanan codsiga oo kaalmeynta kharash maxkamad dirin koow adiga baa kulan wada tashi kula yeelan. Kulankaan wada tashiga wuxuu caadiyan qaadan hal saac iyo kharashkaas adiga baa iska bixin. Kulan wada tashi oo hal saac socon waa 1 755 karoon oo waa sida nidaamka dowlada go’aamisay oo kaalmeynta kharash maxkamad sanadka 2020. Kulanka koowad oo wada tashiga waxaa isla fiirin arrintaada iyo adiga waxaad heli fursad aad khilaafka warbixin naga siisid. Markas kadib baa anaga kaa caawin codsashada lacagta kaalmeynta kharash maxkamad waa haddii xaaladaada ey quseyso.